China Ọhụrụ klọọkụ galik rụpụta na ụlọ ọrụ | Nongchuanggang
Osisi ohuru ohuru
Garlic nwere ihe karịrị 200 bekee, nke na-enyere ahụ ike na anụ ahụ ike, na mgbakwunye protein na vitamin, calcium, iron, zinc na ihe ndị ọzọ mejupụtara bukwara ụba, nri galik adịla nnọọ nso n'obi ndị mmadụ, mana a ọtụtụ ndị nwere ike ọ gaghị na-eche uru ahụ ike si ewating garlic, raw garlic bụ n'ezie nwekwara ọghọm, nwekwara ọtụtụ ụzọ isi esi galik.
Garlic nwere ọtụtụ ihe karịrị 200 na-enyere ahụ ike na ahụike aka, na mgbakwunye protein, vitamin E, C na calcium, iron, selenium na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ, ihe kachasị emetụta mmadụ niile bụ imeziwanye ahụ mmadụ nke S - allylcysteamine (SAC), na ike antibacterial nke allicin.
Ọ bụrụ na galik agwakọta na nkochi ime akwa, ọ nwere ike igbochi arịa ọbara na ịka nká, akwa nkochi nwere lecithin nwere ike wepu adhesion nke cholesterol dị na mgbidi arịa ọbara, rụọ ọrụ na iweda cholesterol. Na mgbakwunye, nkochi ime akwa nwekwara vitamin E bara ụba, nwere ike igbochi acid na-arụ ọrụ, belata usoro ọbara na ịka nká; Garlic na-eme ka mgbasa ọbara dịkwuo mma. Otu nchịkọta a ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ịnwe mmetụta ịka nká ka mma, ịtụ egwu ọgwụgwọ ọrịa oyi ọbụlagodi ịkpụzi ntutu nwekwara mmetụta dị mma. Maka ndị na-enweghị isi ísì galik, galik na nkochi ime akwa bụ ezigbo nhọrọ. Ọ bụ ngwakọta nke galik a mịrị amị na nkochi ime akwa, nke ejiri nwayọ ghee ya. Ọ naghị afụ ụfụ ma ọ bụ na-akpali afọ.
Na mgbakwunye, ụfọdụ akụrụngwa nwekwara ike igbochi ụfọdụ ọrịa nke sistem okuku ume, dị ka ime ka mgbali elu ọbara kwalite, ịkwalite sistemụ mgbasa ọbara, igbochi mkpokọta platelet, izere thrombosis, ịhazi glycolysis, wdg. nke nri, kamakwa ụzọ bụ isi iji gbochie ma gwọọ ọrịa na usoro niile nke ndụ.
Typedị ngwaahịa Liliaceous Vegetabless
Nha (cm) 5
Nọmba nlereanya A1
Aha ngwaahịa Galiki
agba acha ọcha
Di iche-iche Nkịtị ọcha garlic
Nha 4.5-5.0cm, 5.0-5.5cm, 5.5-6.0cm, 6.0-6.5cm
Chekwa oge Ọnwa 9 n'okpuru ọnọdụ kwesịrị ekwesị
Opekempe ego Tọn 28
Ngwugwu ntupu akpa ma ọ bụ katọn
Oge Mbuga ozi N'ime ụbọchị asaa
Port Port Qingdao
Mbido Shandong, China
Nke gara aga: Garlic akpọnwụla
Osote: Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ
Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ